Uyilungisa njani ikhowudi yempazamo 910 kwiVenkile yokudlala | I-Androidsis
Uyilungisa njani ikhowudi yempazamo 910 kwiVenkile yokudlala
Akukho nto inje ngenkqubo yokusebenza egqibeleleyo. Akukho 100% yenkqubo yokusebenza ekhuselekileyo. Zonke iinkqubo ezisebenzayo zichaphazeleka ziimpazamo zokusebenza, iimpazamo, kwiimeko ezininzi, ezinesisombululo esilula, njenge Dlala Impazamo yeVenkile 910.
Njengokuba singafumana impazamo 910 kwiVenkile yokuDlala, sinokufumana neminye imiyalezo yempazamo kwiVenkile yokudlala efana ne-491, 921, 413 kunye ne-495, ethi, nangona ingengabo bodwa, ixhaphake kakhulu. Apha siyakubonisa uyilungisa njani impazamo yeVenkile yokudlala 910.
1 Ithini impazamo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle 910
2 Uyilungisa njani impazamo yeVenkile yokudlala kuGoogle 910
2.1 Qalisa isixhobo
2.2 Cima i-cache kwiVenkile yeGoogle Play
2.3 Cima i-cache yeeNkonzo zikaGoogle
Ithini impazamo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle 910
Bonke abavelisi benkqubo basebenzisa uthotho lweekhowudi, ngokubanzi ngokwamanani, ukukhawuleza ukubona iingxaki ezinokuthi ziboniswe yinkqubo. Xa isikrini sokufa esiluhlaza siboniswa kwiWindows, sinokujonga ifayile ye- Ikhowudi yempazamo yehexadecimesixelela ukuba ngowuphi umthombo wempazamo.
Kwimeko yeWindows, 99% yexesha, yingxaki yehardware, ingxaki ebonakala xa sitshintshe icandelo lekhompyuter yethu okanye nayiphi na, ngakumbi i-RAM, uqala ukubonisa iimpawu zokuba kufuneka uthathe umhlalaphantsi.
Kwimeko ye-smartphone ye-Android, ngethamsanqa, iikhowudi zempazamo zibonisiwe ichaphazela kuphela iingxaki zesoftware, ayize ibe zizixhobo zekhompyutha. Ukuba i-Hardware ayisebenzi okanye ayisebenzi ngokungalunganga, akufuneki silinde umyalezo wemposiso, umsebenzisi uyazi kakuhle ukuba lixesha lokutshintsha iiterminal.
Impazamo engu-910 eboniswe kwizitishi ze-Android, ibonisa ukuba isicelo seVenkile yokudlala (apho kubonisiwe) sinengxaki ethile okanye ukuphazamiseka ayikuvumeli ukuba utolike ngokuchanekileyo imiyalelo yokukhuphela okanye yokufaka uhlaziyo.
Ezinye iimpazamo ezinxulumene neVenkile yokudlala kwaye zisonjululwe ngendlela efanayo nale, kunjalo 491, 921, 413, 495, 506, 509, 492, 905… Nangona kunjalo, le miyalezo yemposiso iboniswe manqaphanqapha kune-910.
Uyilungisa njani impazamo yeVenkile yokudlala kuGoogle 910
Ukuba i-terminal yakho ikubonisa ifayile ye umyalezo wemposiso 910 ngalo lonke ixesha uzama ukukhuphela usetyenziso olutsha, olukhuphele ngaphambili okanye alukuvumeli ukuba ufake uhlaziyo olutsha lwezicelo ozifakileyo kwifowuni yakho.
Zonke iinkqubo zokusebenza zifuna ukuqala kwakhona rhoqo. Nangona izixhobo eziphathwayo zenzelwe ukuba zibekho ixesha elide (akukho mntu ucima i-smartphone ebusuku), ngokuhamba kwexesha, ukusebenza kwezicelo kunye nenkqubo ngokubanzi ayifani.
Kulungile ulawulo lweememori luzenzekelayo kwaye linoxanduva lokuvala zonke izicelo esingakhange sizisebenzise okwethutyana ukuze sibenendawo yokugcina inkqubo kwaye sikwazi ukuqhuba ezinye izicelo. Nangona kunjalo, njengoko benditshilo ekuqaleni, akukho nkqubo yokusebenza ifezekileyo.
Yiyo loo nto ingaze ibuhlungu qala isixhobo sakho amaxesha ngamaxesha. Ukuqala kwakhona ngexesha, kunokuthintela ngaphezulu kwengxaki enye kunye nezoyikiso ezibandakanya ngokubanzi. Ukuthatha konke oku kuthathelwa ingqalelo, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuqalisa isixhobo sakho.
Ukuqala ngokutsha isixhobo sethu, kufuneka nje cinezela kwaye ubambe iqhosha lokuqala imizuzwana embalwa kwaye ukhethe uQalile kwakhona ukhetho.
Ukuba sifuna ukucima isixhobo endaweni yokusiqala ngokutsha, Iziphumo ziya kufana, kuba siya kuba nakho ukuyicoca ngokupheleleyo imemori yezixhobo zethu kunye nendawo yokugcina iifayile.
Cima i-cache kwiVenkile yeGoogle Play
Ukuba emva kokuqalisa kwakhona i-terminal yethu, singena kwiVenkile yokuDlala kwakhona, kufuneka sizame esinye isisombululo, isisombululo esihambayo cima i-cache kwiVenkile yokudlala. Ukwenza oku, kufuneka senze la manyathelo alandelayo:
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukufikelela kwifayile ye- useto Ukucwangciswa kwesiphelo sethu.
Emva koko, cofa apha Izicelo.
Ngaphakathi Izicelo, sifuna I Google Play Store kwaye ucofe.
Ngaphakathi kukhetho lwesicelo seGoogle Play Store, cofa apha Ukugcina.
Emva koko, kwicandelo le-Cache, cofa kwiqhosha Sula i-cache.
Emva koko, sivula usetyenziso lweVenkile yokuDlala kwakhona kwaye Sijonga ukuba impazamo eyi-910 iyekile ukuvela. Ukuba akunjalo, siya kwicandelo elilandelayo.
Cima i-cache yeeNkonzo zikaGoogle
Esinye sezisombululo esinazo xa kufikwa ekusombululeni impazamo 910 ukuba izisombululo ezimbini ezidlulileyo endikhe ndaziphawula azisebenzi, dlula cima i-cache yeeNkonzo zikaGoogle. Iinkonzo zikaGoogle zihlala zihlaziywa kwaye zisebenza ngaphandle kwenguqulelo ye-Android oyifakileyo kwisixhobo sakho.
Ke ngoko, nangona i-terminal ilawulwa yi-Android 7 okanye i-Android 8, iiNkonzo zikaGoogle zigcinwa zisemgangathweni ukusukela oko Ziyindlela yokungena kwi-Google ecosystem. Ukuba ezi nkonzo, usetyenziso lukaGoogle alunakusebenza.
Umzekelo ocacileyo wokubaluleka kwezi nkonzo unokufumaneka kwiitheminali zeHuawei. Ukusukela urhulumente wase-United States avale umnyango ka-Huawei wokusebenza neenkampani zaseMelika, inkampani yaseAsia khange ikwazi ukuphinda isebenzise ingxelo esemthethweni kuGoogle I-Android isungula minyaka le, ke inkqubo yokusebenza elawula ii-smartphones zeHuawei ayibandakanyi iinkonzo zikaGoogle.
Ngale ndlela, awungekhe usebenzise nasiphi na isicelo sikaGoogle okanye uninzi lwezicelo ezifumaneka ngokuthe ngqo kwiVenkile yokudlala, ukusukela oko abanakho ukufikelela kuseto lwamathala eencwadi abandakanyiweyo kwezi nkonzo kwaye basebenzisa inani elikhulu lezicelo.
Ukucima i-cache yeeNkonzo zikaGoogle, kufuneka senze amanyathelo endikubonisa wona apha ngezantsi:
Ngaphakathi Izicelo, sifuna Iinkonzo zikaGoogle Play kwaye ucofe.
Emva kokwenza amanyathelo amathathu endikubonise kuwo eli nqaku, impazamo 910 ebonakala xa uzama ukukhuphela usetyenziso iya kube ilahlekile kwaye Uyakwazi ukusebenzisa iVenkile yokuDlala kwakhona njengesiqhelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Uyilungisa njani ikhowudi yempazamo 910 kwiVenkile yokudlala
Yintoni i-bloatware kwaye uyisusa njani kwi-Android
I-Realme GT, ifuna ukudiliza umnyango weziphelo eziphezulu